Gadzira Chinangwa Yemahara - Fyrebox
Gadzira yako Quiz yeWebhusaiti yako kana Blog
Gadzira quiz yekugadzira inotungamira, kudzidzisa kana kungoita vateereri vako.
Tora ShanyoGadzira Chinangwa Yemahara
Imwe Quiz, Mafomati maviri
Kugadzira quiz kunogona kubatsira bhizinesi rako
Ita yako quiz yako yekugadzira tungamira. Kunyangwe yako anotungamira iri bhizinesi kune bhizinesi kana bhizinesi kune vatengi, quiz inzira huru yekugadzira inotungamira pane yako webhusaiti, yekutora peji kana pane yemagariro media.
Iwe unogona kutumira iyo data inotorwa neyako quiz otomatiki kune zvinopfuura mazana matatu emabasa.
Iyo inotungamira yakagadzirwa neyako Quiz pinda yako yekutengesa kutenderera otomatiki uye tanga kuburitsa mari.
GADZIRA YAKO YEMWE Mhinduro
Iyo data inounganidzwa nemubvunzo wako ndiyo yekutanga nzvimbo
Quiz inogona kudzidzisa chero chinhu kune vadzidzi vako. Kubva pachikoro chepuraimari kusvika kuyunivhesiti, Quizzes inoita kuti dzidzo iwedzere kuita uye kunakidza. Iwe unogona zvakare kuedza ruzivo rwevadzidzi vako uye kuwana yavo mhedzisiro munguva chaiyo.
Yako Quiz inorekodha otomatiki vatambi ve yako Quiz nemhinduro yavo.
Unogona kusarudza kugamuchira mushumo wemutambi wega wega kana kuvaburitsa vese
Mune iyo mishumo, iwe unokwanisa kuwana mhinduro dzevatambi, iyo nguva yavakashandisa pane yako quiz uye yavo nhanho.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve kugadzira quiz
Quiz inogona kushandiswawo seyakanyorerana ongororo. Iwe unogona kubvunza chero mubvunzo uye kuwana iyo nhamba mune chaiyo nguva
Iwe unogona kuwana iyo nhamba ye quiz yako munguva chaiyo.
Nhamba dzakanyorwa ne Quiz yako dzinokupa mhedzisiro yekutsvaga kwako mumusika munguva chaiyo kuti iwe ugone kutanga kutora chiito.
GADZIRA YAKO YEMIBONO MAHARA